Shantui Janeoo services Shiheng Canggang njanji kuvaka chirongwa | Shantui
Munguva pfupi yapfuura, iwo matanhatu maseti eSjHZS240-3R kongiri yekusanganisa simiti inoshandiswa neShantui Janeoo yekuvaka Shiheng-Canggang Intercity Railway yakaiswa uye yakabudirira kuendeswa kune vatengi.
Midziyo yese inotora pepa resenti simiro chimiro, uye chishandiso chimwe nechimwe chakagadzirirwa ne500-ton sheet sement silo seyese silo, iyo inowedzera zvakanyanya kuoma kwekuvaka. Munguva yekuvaka, yaive mwaka yekunaya, uye saiti yacho yaive nemadhaka chete. Kuona nguva yekuvaka, vashandi vebasa vaiwanzopfeka majasi anonaya uye majombo kuti vavake kunaya, vachinyatso tsika tsika ye "zuva rinenge mazuva maviri nehafu" nezviito zvinoshanda. Nesimba risingaregi revashandi vebasa, zvigadzirwa zvakaendeswa kune vatengi vane hunhu hwakavimbiswa uye huwandu, uye izvozvi vari mumamiriro akanaka.
Zvinonzi Shiheng-Canggang Intercity Railway mutsetse wakakosha mukurongwa kweBeijing-Tianjin-Hebei intercity njanji network. Izvo zvakakosha pakuvakwa kweiyo "ina yakatwasuka uye ina yakatwasuka" mafupa makuru eBeijing-Tianjin-Hebei intercity njanji network, uye imwe-awa traffic kubva kuShijiazhuang, guta guru rePurovhinzi reHebei, kuenda kumaguta akakomberedza. Izvo zvakakosha zvikuru kuziva kukurumidza kubatana pakati pesoutheast Hebei neTianjin nekupfuura; kusangana nevatakuri kuyerera kwekutsinhana zvinodiwa zvemaguta nemataundi ari munzira uye nekuvandudza kuunganidzwa kwechiteshi nekuparadzira system.